Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : /bins/ohabolana/aleo.mg.pv
Proverb Aleo halañi ty ampanjaka teñe ty ho halañi ty fokonolo. [Poirot & Santio: Vezo]
Proverb Aleo joko mihasolanga, toy izay solanga mihajoko. [Cousins 1871 #90, Nicol 1935 #249]
Proverb Aleo lozabe ahombiazana toy izay malemy tsy azo. [Houlder 1895 #379, Veyrières 1913 #6337, Rinara 1974 #115]
Proverb Aleo mahia mahatratra, toy izay matavy malim-bolo. [Cousins 1871 #93]
Proverb Aleo mandroso ho faty, toy izay miverin-ko may. [Cousins 1871 #96, Nicol 1935]
Proverb Aleo manenin-draha teo, toy izay manenin-draha lasa. [Veyrières 1913 #6409, Rinara 1974 #123, Houlder 1895]
Proverb Aleo manontanintany foana hihomehezany, toy izay hanaonao foana hotezerany. [Cousins 1871 #97]
Proverb Aleo maty hafoy toy izay velon-kijaly. [Veyrières 1913 #2838, Cousins 1871 #99, Rinara 1974]
Proverb Aleo matoky tapany, toy izay mangovitra erany. [Houlder 1895 #977, Cousins 1871 #98]
Proverb Aleo miadan-ko reniny, toy izay mitsaraingon-ko vantony. [Houlder 1895 #1250, Veyrières 1913 #4716, Cousins 1871 #104, Rajemisa 1985]
Proverb Aleo mifanena amy ny mpamosavy, toy izay mifanena amy ny mpandainga. [Cousins 1871 #105]
Proverb Aleo mitomoe-mandina, toa laferana, toy izay hitsangan-ko mavo, toa ranjo. [Cousins 1871]
Proverb Aleo ny iray tampo tsy tiana, toy izay ny fati-dra. [Veyrières 1913 #143]
Proverb Aleo ratsy tarehy ka tsara fanahy, toy izay tsara tarehy ka ratsy fanahy. [Houlder 1895 #93]
Proverb Aleo toje pañosave teñi ty toje pavande. [Poirot & Santio: Vezo]
Proverb Aleo tsaroan-tsy enina, toy izay voky tsy tsaroana. [Rinara 1974 #140, Cousins 1871 #111]
Proverb Aleo tsy tiam-bady toy izay tay tian-drafozana. [Houlder 1895 #1846]
Proverb Aleo vandana imaso, toy izay vandana ivoho. [Houlder 1895 #483, Rinara 1974 #142, Cousins 1871 #113]
Proverb Aleo vandan’ imaso toy izay vanda-miambo ! fa ny teny imaso tsy mba kilema. [Nicol 1935]
Proverb Aleo volo hala ataon--drafy, toy izay fifoloana ataon-kavana. [Rinara 1974]
Proverb Andevolahy diso vozon-kena : aleony maty toy izay very anjara. [Veyrières 1913 #507, Cousins 1871 #177]
Proverb Aza manao horirika Ambohipeno, ka aleo lo toy izay ho an-kavana. [Rinara 1974]
Proverb Indrindra hiseho ihany dia mananety, fa indrindra raha tsy hiseho aleo mitoto-bozaka. [Rinara 1974 #1428]
Proverb Papango miohatra an' i Lohalambo : aleo tsy miohatra toy izay mihoa-menatra. [Cousins 1871, Veyrières 1913, Rinara 1974]
Proverb Raha hihinan-droa trano tsy ho voky, tsy aleo mitsahatra amin' ny efa nihinanana. [Rinara 1974 #3573]
Proverb Raha hitsangana ka tsy hahay, aleo mitomoe-misonenika. [Houlder 1895 #1655]
Proverb Raha hitsangan-tsy mahay, aleo misonenika an-toerana. [Rinara 1974 #3575]
Proverb Raha indrindra ho faty ihany, aleo matin-janak' anabavy. [Rinara 1974 #3580]
Proverb Raha mitsangan-ko mavo toa valanirana, aleo mipetraka ho sampan-javatra. [Veyrières 1913 #5875, Rinara 1974 #3621, Houlder 1895]
Proverb Raha samy ho avy ihany ny loza dia aleoko atrehin-olon-tiana. [Rinara 1974 #3651]
Proverb Raha tanora tsy ho jejo, dia aleo maty ho razana. [Houlder 1895 #1770, Veyrières 1913 #3060]
Proverb Raha tsy mahatelina ny manavy, aleo ho an' ny manetsetra. [Rinara 1974 #3669]
Proverb Sasa-lamban' Antananarivo: aleo ho rovitra toy izay tsy madio. [Houlder 1895]